परदेशबाट गाउँँ आएका युवाहरु | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / परदेशबाट गाउँँ आएका युवाहरु
परदेशबाट गाउँँ आएका युवाहरु
Posted by: युगबोध in विचार April 16, 2018	0 67 Views
ने पाली नागरिकहरुमध्ये ४० प्रतिशत परदे शी जीवनमा छन् । दे शमा रो जगारको वातावरण बन्न नसके को अवस् थामा परदे शी युवाहरुको संख्यात्मक रुपमा बृद्धि हुनु राष्ट्रका लागि चिन्ताको विषय हो  । यसतर्फ राजनीति गनेर् व्यक्तिहरुले स् वरो जगारको वातावरण दे शमा निर्माण गर्न सके नन् । युवाहरुलाई विदे शी भूमिमा दासत्व बनाएर उनीहरुको कमाइबाट रे मिट्यान्स भिœयाउने खे लहरु खे लिरहे को छ । यस् तो वातावरणले राष्ट्रियतामाथि खतरा बढाएको पाइन्छ । यसले राजनीति गनेर् हरुको कार्यशै ली नांगो नाच भयो  ।
दे शमा बे रो जगार हटाउने प्रशस् त कार्यक्रमहरु बनाउन सकिन्थ्यो  । प्रशस् त आधारहरु थिए । तर राजनीतिक क्षे त्रमा भएकाहरुलाई विकास गनेर् सो चाइ भएन । विदे शीहरुको अनुदानलाई दुरुपयो ग गर्न सफल भए भने आफ्नो आर्थिक उन्नतितर्फ मात्र लम्पट भए । यस् ता प्रकृतिका ने ताहरुमा राष्ट्रप्रति गर्नुपनेर् से वाभाव दे खिएन । एउटै आधार पाइयो त्यो थियो समयको सदुपयो ग गर र आफ्नो आर्थिक उन्नतिका लागि धन कमाउने धन्धा गर । यसका लागि डन, तस् कर, दलालहरुको साथ ले ऊ । उनीहरुलाई टे वा दिएर आफ्नो अवस् था सुधारमा ने ताहरु लागे पछि जे जस् तो राजनीतिक परिवर्तन ल्याए पनि दे शभित्र युवाहरुलाई रो जगारको वातावरण बने न । बनाउने प्रयास पनि भएको छै न ।
धे रै युवाहरुलाई कृषि व्यवसायतर्फ लगाएर उनीहरुले उत्पादन गरे का वस् तुहरु उचित मूल्यमा सरकारले खरीद गनेर् र खाद्य अभाव भएका ठाउ“हरुमा पठाउने गरे को भए, दे शमा खाद्य समस् या हट्ने थियो  । विदे शबाट आयात गनेर् खाद्य वस् तुको रकम बाहिरिने थिएन । दे श खाद्य आपूर्तिमा आत्मनिर्भर हुने थियो  । धे रै युवाहरुले दे शभित्र काम गनेर् अवसर पाउने थिए । परदे शको दासत्वमा बा“धिने थिएनन् । यसतर्फ कुनै पनि दलका ने ताहरुको ध्यान गएन । सुधारका प्रयासहरु भएनन् । यस् तो वातावरणमा सुधार र विकासको आशा कसरी गनेर् ? दलहरुप्रति जनताको रुचि कसरी बढाउने ? चिन्तासम्म गर्न नभ्याएका ने ताहरुप्रति जनताको झुकाव घट्दै गएको अवस् था छ । ने पालबाट राणा शासन हट्यो  । प्रजातन्त्र से लायो  । राजा महे न्द्र वीर विक्रम शाहले ल्याएको पञ्चायती व्यवस् था अफाफसिद्ध भयो भन्दै दलगत भावनाको लो कतन्त्र ल्याए । त्यो पनि राजावादी लो कतन्त्र भयो भन्दै आन्दो लन मच्चाए । सबै प्रकारका ने ताहरुलाई मान्य हुने संघीय लो कतान्त्रिक गणतन्त्र आयो  । राजा पनि हटे  । जनताका छो राछो रीहरु शासक, प्रशासक र अगुवाहरु भए । संविधान पनि बनाए । अन्तरकलहमा समय पनि बिताए । भारतीय दबाबलाई सहन गर्न सकिन्न पनि भने  । भारतको दबाबपूर्ण तरीकाको नाकाबन्दी पनि सहे र बसे  । राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि बलिदान दिने नागरिकहरु जागे  । बलिदान दिए । तर भूतो न भविष्य भएको अवस् था भयो  । मनेर् हरुका परिवारहरुको बे हाल छ । विदुर, विधवा, टुहुराटुहुरीहरुको संख्या बढ्यो  । उनीहरुले निराशा र पश्चाताप गरे का छन् । राष्ट्रहित गनेर् भन्ने ने ताहरु कुर्सीको लडाइ“ गर्न थाले  । उनीहरुले कुर्सी पाए । आफूस“ग लड्न गएका साथीभाइहरुलाई बिसेर्  । घरमा भएका निसहाय बृद्धबृद्धालाई फो स्रो सान्त्वना दिए । चिल्ला गाडीमा चढ्दै हो टलहरुका मीठा परिकारहरु खा“दै हि“ड्न लागे  । त्यस् ता ने ताहरुले भन्छन् हामी दे शमा विकास र समृद्धि ल्याउ“छौ  । यो भनाइ उनीहरुका लागि हो , जनताका लागि हो इन ।
जनताको भलो चाहने ने ताहरुले स् थानीय नागरिकहरुको समस् या बुझ्छ । त्यहा“को आवश्यकता हे र्छ । उनीहरुको भलो हुने काम गर्छ । त्यस् तो ने ता समाजवादी ने ताका रुपमा जनताले चिन्छन् । दे श विकासमा जुट्छन् । राष्ट्र निर्माणका आधारहरु चा“डै पहिल्याउ“छन् । भनिन्छ ने ताहरु भन्दा नागरिकहरु चलाख छन् । उनीहरुमा आर्थिक अभाव छ । त्यो अभाव पूरा गर्न परदे शको दासत्व स् वीकार्छन् । यो अवस् थाले ने पाली युवाहरु परदे शी बन्नु परे को कारण अधिकांशलाई ज्ञान हुनुपर्छ । तर ज्ञानको विकास गरे को पाइन्न । ज्ञान र सीप नभएका अधिकांश ने ताहरुको बुद्धिको विकास नभएकाले ने पाल पछौ टे मुलुकमा गणना हुन्छ । ने ताको मूल्यांकनका आधारमा स् थानीय विकास हुने हु“दा ने पालका सुन्दर, मनमो हक प्राकृतिक वातावरण भएर पनि पर्यटन क्षे त्रमा पछि परे को महसुुस गनेर् पर्यटकहरु थुप्रै भे टिन्छन् ।
ने ताहरुको भाषण सुन्छौ ं– ने पाल कृषिप्रधान दे श हो  । तर त्यही ने ताको व्यवहार कृषिमन्त्री भएपछि फरक पाउ“छांै  । कृषि क्षे त्रमा विकास नगरे को  । सहकारीका नाममा थुप्रै रकम बा“डे को । कृषि व्यवसायका नाममा आर्थिक अनियमितता भएको  । यस् तो अवस् थामा कसरी कृषि क्षे त्रको विकास हुन्छ र कृषक वर्गमा विकास र समृद्धि कहा“बाट आउ“छ ? ने ताहरुको नारामा विकास समृद्धि र शान्तिले गति पाउने आशा मदैर् गएको दे खिन्छ । त्यसकारण युवाहरुले कृषि व्यवसायप्रति रुचि घटाउ“दै छन् । विदे श पलायन हु“दै गएका छन् । हरे क दे शले कृषि विकास गनेर् आधार बनाए । युवाहरुलाई कृषि कार्यमा झुकाव बढाए । दे श विकासको पूर्वाधार कृषि व्यवसाय माने  । तब मात्र दे शमा कृषि विकास गर्न सके का उदाहरणहरु थुप्रै छन् । ने ताहरुले भारत र चीनको भ्रमण गर्छन् । प्राकृतिक र मानव निर्मित दृश्यहरु हे र्छन् । तर ज्ञान सिक्न सक्दै नन् । अन्तमा दृश्यावलो कन गरे र फर्कन्छन् । गाउ“मा जान्छन् र भन्छन्– गाउ“मा लाहुरे आयो  । मलाई के ल्याइदियो  । परदे शवाट गाउ“मा फकेर् का युवाहरुले ने ताका लागि को से ली ल्याउनुपनेर् अवस् था भो ग्छन्– परदे शबाट आएका युवाहरु । उनीहरुले को से ली दिदै ने तालाई भन्छन्– परदे शमा पसिना बगाएको उपहार । परदे शमा दासत्व जीवन बिताए पनि आफ्नै दे शमा पनि दासत्व जीवनशै ली अपनाउनुपरे को छ ।
Previous: जिल्ला अस्पताल प्युठानमा दन्त सेवा शुभारम्भ
Next: समृद्धिको आधार अग्र्यानिक कृषि